Okulandelayo | Ikamva Lomsebenzi | UCheryl Cran
ICheryl Cran NextMapping ™
Zama ikhosi yasimahla
Inkqubo ye-NextMapping ™
Imicimbi ebukhoma kunye neRecrets
Ikhosi entsha ye-Intanethi
Uyenza njani kwaye uyenze eNtsha njani ngeSantya soTshintsho
Jonga yonke ikamva leKhosi ye-Intanethi ye-Intanethi
Izakhono ezitsha eziFunwayo ngaBasebenzi ukuze baVuselele iKhosi- $ 79 Thenga ngoku
Indlela elandelayo™ Sebenza
Sebenzisa izicwangciso eziphambili zokukunceda ukwazi ukuhamba kwi ikamva lomsebenzi -Sinceda ukukubonisa ukuba yintoni elandelayo kwinkampani yakho, iinkokeli zakho kunye namaqela akho kwaye ucwangcise into ekufuneka uyenzile ikamva lilungile Ngoku.
Ngaba iinkokeli zakho zikulungele okulandelayo? Ngaba iinkokeli zakho zinazo 'izakhono zexesha elizayo' ukukhokela utshintsho olufunekayo ukuze zifike apho? Sinezisombululo ezihlanganisiweyo zokunceda iinkokheli zilungele ikamva ngoku.
Ngaba amaqela akho asele ekhulile kwaye enobuchule? Sinezixhobo zokuncedisa amaqela akho ukuba abambe iinkokeli zotshintsho ezenza okulandelayo kwikamva.
Ngaba ungusomashishini olungele ikamva? Nokuba ulishishini eliqalisiweyo okanye uqalo sinokukunceda kwimephu elandelayo.
Iinkonzo zesicwangciso esibonelela ngazo
Funda kwimfuno nakwixesha lokwenyani.
Iikhosi zevidiyo ezizihambelayo kunye nokukhetha ukusebenza nge-NextMapping™ umqeqeshi.
Nceda iinkokeli zakho namaqela zilungele ikamva ngoku ngezakhono zamva nje kunye nezicwangciso.
Ukuphefumlelwa, uphando, izicwangciso ezinokusetyenziswa kunye nokusika umxholo yinto oyifumanayo xa usebenza noCheryl Cran njengesithethi sakho esiphambili kumsitho wakho okanye umsitho ophilayo. Ukwenza ngokwezifiso kunye nokusebenzisana.
Amaxesha okungaqiniseki afuna okona kuluncedo kakhulu kwiinkokeli kunye namaqela. Sebenza ngokulandela iMephu yethu elandelayo™ abaqeqeshi ukuphakamisa izakhono zobunkokeli, ukonyusa ingcinga yesicwangciso kunye nokuphucula ukusebenza kwabasebenzi abasebenza kude.
Njengeshishini lokubonisana ngeboutique sisebenza kunye namashishini amancinci aphakathi kunye nabarhwebi ukuqinisekisa ubungqina kwishishini
kunye nokwakha amathuba okhuphiswano, ukugqwesa kwinyani yomsebenzi ekude kunye nokuphunyezwa kobunkokeli.
Iipesenti ezingama-75 ze-CEO zibonisa ukunqongophala kwabasebenzi abanezakhono njengomqobo omkhulu wokulungela ikamva lombutho.
Kwindlela elandelayo™ sinikezela ngeendlela zokhetho zoqeqesho kunye neendlela zokuncedisa ukuvala isikhewu sezakhono zeenkokeli zakho kunye namaqela.
Uphando lufumanise ukuba iinkokheli kunye noosomashishini bafumana ukuqonda okungakumbi kwezicwangciso-qhinga, imibono enokusebenziseka kunye nezisombululo eziphucukileyo
xa uzibandakanya namaqela amancinci entanga. Imephu yethu elandelayo ekhethekileyo™ ukubuyiswa kwesicelo kwenziwa kuphela.
Jonga uhlaziyo lwethu lwamva nje
Uyenza njani kwaye uyenze njani ngesantya sotshintsho
Ikamva lokuphumelela komsebenzi alixhomekekanga 'kumagorha' amabini okanye amabini kwishishini- ikamva limalunga 'nathi' nendlela yokubonisa kunye nokuyila kwisantya senguquko.
Bhuqa ngoku kwi-50% isaphulelo
Ukubaluleka kokurhweba ngexesha lentlekele kunye nendlela yokuthengisa ishishini lakho
I-Cheryl incokola noBrad Breininger, umseki kunye nomsunguli wezinto kwiZync malunga nekamva lokurhweba kunye neliqhelekileyo.
Isizukulwana Covid kunye neKamva
Isizukulwana Covid nekamva …… Kukho isizukulwana esitsha edolophini - iGeneration Covid yaso ikwabizwa ngokuba yiGen C. ebandakanya abantu abatsha abangaphantsi kwamashumi amabini eminyaka. Ungaziqhelanisa nezinye izizukulwana: uGen Z 1997 ukuya ku-2020 (wazi ngokuba sisizukulwana seendaba zosasazo) Millenials 1981 to 1996 (known […]
Ibhlog elandelayoI-Blog ™ - Funda ngakumbi
94% zeenkokheli zehlabathi ezihlolisisiweyo zi awonelisekanga ngentsebenzo yazo entsha.
77% yabasebenzi abafuna abantu kuqala-yesibini yesibini njengesicwangciso esiliqili sokutshintsha ishishini kwikamva.
16% Iingxelo zeenkampani zinjalo iphumelele ngenguqu yedijithali imizamo.
70% iinkampani zithi ukuba suku banetalente elungele ikamva.
Bambalwa abathengi esikuthandayo ukusebenza kunye
Singathanda ukuva kuwe
Itholi yasimahla: 1.833.NXTMAPP
Nxibelelana nathi kwezentlalo
© Copyright UCheryl Cran 2021 | umthetho wabucala